Nagarik Shukrabar - बुढ्यौलीको जोश
शुक्रबार, १९ माघ २०७४, ०५ : ०७ | शुक्रवार
‘क्विन अफ पप’ नामले चर्चित गायिका म्याडोनाले आफू जति बुढी हुँदै गएकी छन्, त्यत्ति नै तडकभडक गर्दै आइरहेकी छन् । उमेर ५९ वर्षकी म्याडोनाले हालै वक्षस्थल खुला छोडिएको सेल्फी खिचेर हलिउडमा तरंग ल्याइदिएकी छन् । उत्तेजक सेल्फीमा म्याडोनाले आफ्ना वक्षस्थललाई ब्यागले छापेर खिचेकी छन् ।
यति हुँदाहँुदै उनको एउटा स्तन भने बाहिर चिहाइरहेको देख्न सकिन्छ । म्याडोनाले हिजोआज सामाजिक सञ्जालहरुमा बारम्बार टपलेस फोटो हाल्दै आइरहेकी छन् । म्याडोनाका उत्तेजक तस्बिरहरु आइरहँदा हाम्रो मनमा छाएको एउटै कुरा भनेको के हो भने– शरीर बूढो भए पनि म्याडोनाको मन चैं कलिलो नै छ है !
बलात्कारमा भर्जिनिटी गुम्यो
सफल वैवाहिक सम्बन्ध र फिल्मको कारण धेरैले सोच्छन्, अभिनेतृ एमी सुमरको जीवन आनन्दमय छ तर अहिलेको खुसीको अवस्थासम्म आइपुग्न एमीले विगतका धेरै तीता घटनालाई जितेर त्यहाँसम्म पुगेकी हुन् ।
५२ मा पनि सेक्सी !
एलिजाबेथ हर्ली ५२ वर्षकी हुँदा पनि उनको सेक्स अपिलमा कुनै कमी आएको छैन । इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक उनको पछिल्लो फोटोमा त्यही संकेत गर्छ । उनमा बुढ्यौलीको कुनै संकेत देखिदैन ।